Maxkamadda ICJ oo laga sugayo jawaabta soo jeedinnada Kenya iyo Somalia | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Maxkamadda ICJ oo laga sugayo jawaabta soo jeedinnada Kenya iyo Somalia
Maxkamadda ICJ oo laga sugayo jawaabta soo jeedinnada Kenya iyo Somalia
Maxamadda Caalamiga ah ee ICJ oo uwada yeertay waddamada Soomaaliya iyo Kenya oo u ballansanaa dhageysiga dacwadda labada dal ee horay u baaqatay horraantii bishii tagtay ayaa wada gaaray dalka Holand.
Labada dowladood ayaa la wada dhageystay soo jeedinnadooda, waxa ayna dowladda Kenya Codsatay in la siiyo waqti sanad ah oo ay ugu soo diyaar garoobeyso dacwadda Soomaaiya kala dhaxeysa.
Dhinaca Kale Soomaaliya ayaa Maxkamadda adduunka ICJ u sheegtay in ay xaggooda diyaar u yihiin garmaqalka Maxkamadda oo ay aqbaleen dhiggooda Kenya fursado laba ah oo ay horay Maxkamadda usiisay, waxa ayna sheegeen wafdiga kasocday dowladda Soomaaliya ee uu hogaaminayay Ra’isulwasaare ku xigeenka dalka in Soomaaliya aysan aqbali Karin waqti dheeraad ah.
Kenya ayaa horay isaga ceyrisay dhammaan wakiiladeeda ku difaacayay badda, waxa ayna dhowr jeer codsatay in la siiyo waqti dheeraad ah.
Maxkamadda ICJ ayaa looga fadhiya ka go’aan qaadashada dalabyada labada dowladood.
Previous articleWasiirka arrimaha dibedda oo ka hadlay ahmiyadda ay leedahay xarunta Safaaradda ay Soomaaliya ka iibsatay Maraykanka
Next articleWasiirka arrimaha gudaha XFS oo shir caalami ah uga qayb galaya Geneva.